तपाईसँग हातमा पैसा छ ? ९ कम्पनीको १ अर्ब २० करोडको आइपीओ आउँदै छ « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
तपाईसँग हातमा पैसा छ ?
९ कम्पनीको १ अर्ब २० करोडको आइपीओ आउँदै छ
७ बैशाख २०७३, मंगलवार ०३:११
काठमाडाै । तपाईसँग हातमा पैसा छ र लगानी गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने केही समय पर्खनुहोस् ९ वटा विभिन्न कम्पनीले १ अर्ब २० करोड मूल्य बराबरको इनिसियल पब्लिक अफरिङ अर्थात आइपीओ गर्दैछन् ।
प्रकाशित : ७ बैशाख २०७३, मंगलवार ०३:११